လွန်ခဲ့သောနှစ် ၁၀၀ အတွင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ င်ငွေမညီမျှမှုတိုးလာသလား။
ဇူလိုင်လ 15th, 2021
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ၁၀၀ ကျော်အတွင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ င်ငွေဖြန့်ဝေမှု၌အရေးပါသောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုရှိခဲ့ပြီးမကြာမီကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ င်ငွေမညီမျှမှုကိုအဆုံးသတ်ရန် ဦး တည်နေကြောင်းပြသသည်။
Kunal Kaushal အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေမညီမျှမှုလျော့နည်းလာသို့မဟုတ်ပိုဆိုးဖြစ်လာသလဲ စက်မှုတော်လှန်ရေးနောက်ပိုင်းကမ္ဘာ့ဝင်ငွေမညီမျှမှုလျော့နည်းလာသည်။ လေ့လာမှုများအရကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုသည် ၀ င်ငွေမညီမျှမှုကိုကျဆင်းစေသည်။
၂၀၀၈ နှင့် ၂၀၁၃ အတွင်းစက်မှုတော်လှန်ရေးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမညီမျှမှုသိသိသာသာကျဆင်းခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနှင့်တရုတ်ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များသည့်နိုင်ငံများသည်ဤသမိုင်းတွင်ကျဆင်းမှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာပျမ်းမျှ ၀ င်ငွေတိုးပွားလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤတိုးတက်မှုရှိသော်လည်းကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏သုံးပုံနှစ်ပုံသည်နိုင်ငံများအကြားပျမ်းမျှဝင်ငွေကွဲပြားမှုများကြောင့်ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေမညီမျှမှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်သည်။
၁၉၅၆ ခုနှစ်မှစ၍ နိုင်ငံများစွာ၌ ၀ င်ငွေမညီမျှမှုသိသိသာသာကျဆင်းခဲ့သည်။ အာဂျင်တီးနား၊ မက္ကစီကို၊ ပီရူး၊ ဘရာဇီး၊ အီကွေဒေါ၊ အိန္ဒိယနှင့်ယူနိုက်တက်စတိတ်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများတွင် ၀ င်ငွေမညီမျှမှုလျော့နည်းသွားပြီးပါရာဂေး၊
မကြာခဏရည်ညွှန်းသောဂျီနီညွှန်းကိန်းသို့မဟုတ်ဂျီနီအချိုးသည်လူ ဦး ရေအလိုက်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုတိုင်းတာသည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံအတွင်းသို့မဟုတ်လူ ဦး ရေတစ်ခုကျော်၏ ၀ င်ငွေနှင့် ၀ င်ငွေမညီမျှမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ဒီကိန်းကို ၁၉၁၂ ခုနှစ်မှာအီတလီစာရင်းအင်းပညာရှင် Corrado Gini ကတီထွင်ခဲ့တယ်။ ဒီကိန်းကိုတန်ဖိုးက ၀ ကနေ ၁ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၁၀၀% ကြားမှာတိုင်းတာတယ်။ သုညကိန်းတစ်ခုကတိုင်းပြည်ဒါမှမဟုတ်လူ ဦး ရေအတွင်းမှာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့ ၀ င်ငွေကိုညီမျှစွာခွဲဝေမှုရှိတယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ တစ်ခုရဲ့မြှောက်ဖော်ကိန်းကချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့ ၀ င်ငွေဟာမညီမျှမှုရှိတယ်ဆိုတာဖော်ပြတယ်။
သို့သော်ဂျီနီညွှန်းကိန်းသည်ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုသို့မဟုတ် ၀ င်ငွေအတွက်အကြွင်းမဲ့တိုင်းတာမှုမဟုတ်ပါ။ ၀ င်ငွေသို့မဟုတ်ကြွယ် ၀ မှုနှုန်းကိုသာတိုင်းတာသည်။
ဇယား -၂ တွင်2အတွက်ဂျီနီညွှန်းကိန်းကိုပြထားသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ၀ င်ငွေဖြန့်ဝေမှု
ဒီအဆင့်မြင့်ခေတ်၌ပင်ယုံကြည်ရန်ခက်ခဲသည်။ 85% ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ထက်နည်းသည်အပေါ်နေထိုင်သည် $30 သူတို့ထဲကသုံးပုံနှစ်ပုံကဒီထက်နည်းနေတယ် $10 တစ်နေ့လျှင်ဆယ်ယောက်မြောက်လူသည်တစ်နေ့ထက်နည်းသောဘဝဖြင့်သာနေထိုင်သည် $1.90 တစ်နေ့လျှင်။ ဘီလီယံနှင့်ချီသောလူများအနေဖြင့်စားနပ်ရိက္ခာ၊ ရေနှင့်အမိုးအကာစသည့်အခြေခံလိုအပ်ချက်များအားဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းမှ ၀ င်ငွေဖြန့်ဝေခြင်းသည်မညီမျှသည်၊ ယူနိုက်တက်စတိတ်၊ ဂျပန်နှင့်တရုတ်တို့ကဲ့သို့စီးပွားရေးအရအားကောင်းသောတိုင်းပြည်များသည်အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ဘူရွန်ဒီနှင့်ယူဂန်ဒါနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ဂျီဒီပီပိုမိုများပြားသည်။
၀ င်ငွေအဆင့်အရလူ ဦး ရေဖြန့်ဝေခြင်း။
လူ ဦး ရေကိုဝင်ငွေအဆင့်အလိုက်ကဏ္ sections သုံးခုခွဲနိုင်သည်။
၁။ ဝင်ငွေနည်းသောလူ ဦး ရေ
2. အလယ်အလတ်ဝင်ငွေရှိသောလူ ဦး ရေ
3. ဝင်ငွေမြင့်လူ ဦး ရေ
အထင်ရှားဆုံးပြောင်းလဲမှုမှာ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဤကာလအတွင်းဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသိသိသာသာကျဆင်းခဲ့သည်။ 2001 ခုနှစ်တွင်ဆင်းရဲသောလူ ဦး ရေမှာရှိ၏ 1.6 ဘီလီယံအထိဒါပေမယ့် 2011 ခုနှစ်အားဖြင့်အရေအတွက်ကကျဆင်းခဲ့သည် 949 သန်း။
၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်အလယ်အလတ်ဝင်ငွေရှိသောလူ ဦး ရေရှိခဲ့သည် 398 သန်းနှင့် 2011 ခုနှစ်ကတက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် 783 သန်းသိသိသာသာတိုးဖေါ်ပြခြင်း။ တချိန်တည်းမှာပင် ၀ င်ငွေမြင့်မားသောလူ ဦး ရေသည်တိုးပွားလာခဲ့သည် 340 သန်း 428 သန်း။
လူ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ၀ င်ငွေအဆင့်များသည် ၁၉၆၀ မှ ၂၀၁၇ အထိတိုးပွားလာသည်။ ဝင်ငွေမြင့်မားသောလူ ဦး ရေ၊ အလယ်အလတ် ၀ င်ငွေ၊ အလယ်အလတ် ၀ င်ငွေနှင့်ဝင်ငွေနည်းသောလူ ဦး ရေတို့သည် ၁၉၆၀ မှ ၂၀၁၇ အထိ ၀ င်ငွေတိုးပွားလာခဲ့သည်။
ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ ၀ င်ငွေများမည်သို့ပြောင်းလဲသွားသနည်း။
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်လေးခုအတွင်းကမ္ဘာ့ဝင်ငွေသည်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ နည်းပညာနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရလာသည်။ အရှေ့တောင်အာရှရှိဆင်းရဲသောနိုင်ငံများသည်အခြားချမ်းသာသောနိုင်ငံများထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာကြီးထွားလာသည်။
အဆင်းရဲဆုံးဝင်ငွေ 10% မှတိုးမြှင့်ခဲ့သည် ၅ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅ အမေရိကန် ဒေါ်လာနှင့်ပျမ်းမျှဝင်ငွေကနေပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် $1100 သို့ $2010 (ဇယား -၄) ။
တိုးချဲ့ထားသောမူကွဲကိုကြည့်ပါ။ ဒီနေရာတွင် Download
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၊ စက်မှုထွန်းကားခြင်းနှင့်နည်းပညာသည်စီးပွားရေးမူဝါဒများနှင့်ကမ္ဘာအဝှမ်း ၀ င်ငွေဖြန့်ဝေမှုများစွာကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသစ်များကိုကမ္ဘာ့စျေးကွက်တွင်ရှင်သန်ကြီးထွားလာစေရန်အခွင့်အလမ်းများစွာပေးခဲ့သည်။
၀ င်ငွေစီးဆင်းမှုသည်လူလတ်တန်းစားလူများ၏ပျမ်းမျှလစာကိုတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ အစိုးရမှပေးသောအခွန်လျှော့ပေါ့ခြင်းနှင့်အခြားစီးပွားရေးမူဝါဒများကလူ့အဖွဲ့အစည်း၏အားနည်းနေသောကဏ္financialများကိုငွေကြေးတည်ငြိမ်စေရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ဤအရာများရှိသော်လည်းလူ ဦး ရေ ၃.၄ ဘီလီယံသည်ဘာကြောင့်အခြေခံလိုအပ်ချက်များအတွက်ရုန်းကန်နေကြရဆဲဖြစ်သည် 63% လူများ၏ထက်လျော့နည်းအပေါ်အသက်ရှင်ရန်ရှိသည် $10 တစ်နေ့ကို?
အကြောင်းမှာဝင်ငွေမညီမျှမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံဝင်ငွေနည်းပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနည်းသောနိုင်ငံများသည်လူ ဦး ရေအပေါ်တွင်စည်းစိမ်ဥစ္စာမညီမျှမှုရှိသည်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရှိလူများ၏ပျမ်းမျှ ၀ င်ငွေသည်နိမ့်ပါကလူ ဦး ရေအများစုသည်သူတို့၏အလုပ်အတွက်လုပ်ခလစာနည်းပါးလိမ့်မည်။ ၀ င်ငွေမြင့်မားသောလူ ဦး ရေအုပ်စုများသည်တိုင်းပြည်၏ ၀ င်ငွေအများစုကိုယူဆောင်လာပြီးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအကျိုးအမြတ်ရရှိစေမည့်စီးပွားရေးမူဝါဒများကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။
နိုင်ငံများစွာရှိလူများ၏ပျမ်းမျှ ၀ င်ငွေသည်အလွန်နည်းပါးပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကိုကိုင်တွယ်လိုလျှင်တိုးတက်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်သိသိသာသာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုဖြင့်သာဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
၂၀၃၅ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေမညီမျှမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်သိသိသာသာကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ ထွန်းသစ်စ - စျေးကွက်စီးပွားရေးတွင်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ င်ငွေတိုးပွားလာလိမ့်မည်။ လာမည့်ဆယ်စုနှစ်များအတွင်းကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေနှင့် ၀ င်ငွေသည်အဆတိုးများပြားလာပြီးကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတွင်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂျီနီညွှန်းကိန်းသည်ကျဆင်းလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည် 65 2013 အတွက် 61 2035 ၌တည်၏။
လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ င်ငွေသည်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရွေ့လျားနေသောအရှိန်အဟုန်သည်လူလတ်တန်းစားအားငွေကြေးအရခိုင်မာပြီးတည်ငြိမ်စေရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမညီမျှမှုကိုအမှန်ပင်လျော့ချလိမ့်မည်။
ဘောဂဗေဒတွင် 'Convergence' ဟူသောဝေါဟာရကဆင်းရဲသောနိုင်ငံများသည်ချမ်းသာသောနိုင်ငံများထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာကြီးထွားလေ့ရှိကြောင်း၊ အမီလိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုဟုလည်းခေါ်သည်။ ဤသီအိုရီသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအမြတ်အစွန်းများကျဆင်းလာသည့်နိယာမကိုအခြေခံသည်။
စီးပွားရေးနောက်ခံညံ့ဖျင်းသောနိုင်ငံများသည်နည်းပညာအသစ်များဝယ်ယူခြင်းနှင့်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်များတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည်ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒများကိုအကျိုးအမြတ်များစေခြင်းဖြင့်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။ ယင်းကသူတို့တိုင်းပြည်၏အဓိကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။
ဟောင်ကောင်၊ စင်္ကာပူနှင့်အိုင်ယာလန်တို့ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများသည် ၁၉၅၀ မှ ၂၀၁၀ အထိဝင်ငွေတိုးပွားလာကြောင်းပြသခဲ့ပြီး၊
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ င်ငွေမညီမျှမှုကိုလျှော့ချရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့ပြီးလူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျသောနိုင်ငံများရှိနေသေးသည်။ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နှင့်စင်ကာပူတို့ကဲ့သို့စီးပွားရေးများသည်အချိန်နှင့်အမျှစီးပွားရေးအရအားကောင်းလာခဲ့သည်။ သို့သော်ဆိုမာလီ၊ ဆူဒန်နှင့်ဘူရွန်ဒီနီယားတို့သည်သူတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းပျမ်းမျှနှစ်စဉ် ၀ င်ငွေသည်မြင့်တက်လာသည် $3,300 1950 အတွက် $14,574 ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ပျမ်းမျှလူတစ် ဦး သည် ၄ ​​င်းတို့သည် ၁၉၅၀ ခုနှစ်ကထက် ၄.၄ ဆပိုချမ်းသာသည်။
တိတိကျကျပြောရလျှင်လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၁၀၀ အတွင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ င်ငွေမညီမျှမှုသည်လျော့နည်းသွားပြီးပိုမိုကြီးမားသောရုပ်ပုံလွှာကိုကြည့်မည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်နှင့်အတူကြီးမားသောတိုးတက်မှုများရရှိခဲ့သော်လည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမညီမျှမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်မှာများစွာလိုအပ်သည်။
သင်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချဲ့ထွင်မှုကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်ချွေတာရန်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ပြုလုပ်နေသည်ကိုလေ့လာရန် WorldRef ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလေ့လာပါ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ် | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတင်ဒါပါဝင်မှု | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးအတည်ပြု | Global Manpower Contract Services | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူအင်အား Deputation | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုများ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု | အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္Financeာရေးအကြံပေး | ဥပဒေရေးရာ & အခွန်အကြံပေး | After- အရောင်းဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးမှု